New phakathi kwabezindaba - SSD-drive
Kuyinto evamile baqagela ukuthi SSD-drive futhi banamathemba omkhulu amanga yokukhiqiza ubuchwepheshe nabezindaba. Cishe noma yimuphi isihloko iforamu zingatholakala bencoma Izibuyekezo wabanikazi lucky yalezi amadivaysi. Kuyini ezidingekayo SSD-drive esekelwe kwimemori okuqinile-state?
Njengoba yaziwa, ukusebenza kunoma iyiphi ikhompyutha kunqunywa ijubane lapho CPU wenza imisebenzi zezibalo. Empeleni, i-English, igama elithi "umshwana Yekhompyutha" kusho "ukubala, ukubala." Nokho, kusobala. Kodwa uyini SSD-drive? Eqinisweni, uxhumano ngqo. Yebo, noma imuphi uhlelo Computing akugcini processor olulodwa, futhi kuyinto eyinkimbinkimbi izingxenye ezahlukene, ngalinye elikwazi yenza imisebenzi eminingi. Ngakho, kukhona isimo lapho icutshungulwe yi idatha Computing iyunithi eyeka ngakolunye amasayithi kokuba ukusebenza elilinganiselwe isakhi oluyinhlanganisela. Ekhuluma mkhuba, uvame ukubizwa bottleneck lapho velocity of outflow uketshezi kwesigubhu kukhawulwe ububanzi entanyeni tapered.
Enye yalezi zingxenye kancane - kudiski subsystem. Kusukela zakudala hard drive kusekelwe ligijima disk kazibuthe, ukusebenza okwakheka imithetho Mechanics. Ngokwesibonelo, onobuhle izindleko, kanye linemibhikisho abayizinkulungwane eziyishumi ngomzuzu kakhulu njengoba kuphakeme kakhulu izixazululo efanayo, kodwa 7200. Sekukonke ezinye extra 2800 ngomzuzu - futhi intengo idivayisi ikhule kakhulu. Isizathu salokhu yisidingo sekulinganisa esinembile, usebenzisa amabombo ngcono njalo njalo. Kodwa muva nje ikhambi utholakale. Kwatholakala SSD-drive.
Izici ezintsha kumnandi
kudala umkhakha ikhompyutha babona isidingo sokuba ngokuyinhloko entsha kudivayisi Imininingwane ukugcina, angathathwa lingekho le nokukhawulela isici Mechanics. Njengoba sekunama-transistors nge elintantayo esangweni uhlobo, sebekwazi ukwakha chip flash inkumbulo. Futhi ngenxa yalesi simo - yesitoreji idatha. abathwali ezinjalo azizintsha neze ingxenye design yayo, akukho izingxenye ezinyakazayo, okusho ukuthi ukusebenza kwabo kuncike izici transistors ngokwabo (ngesivinini esingakanani inkinobho electronic Ungashintsha esimweni saso) nezici isilawuli, amalungu afanayo ukulawula inkumbulo cell.
Ngesikhathi esifanayo, lobu buchwepheshe enezinto eziningi izici ungavumeli amadivayisi SSD kusuka emakethe esikhundleni ngokuphelele HDD «Oldies". Nye of them we izobonisa okwengeziwe ucabangela inketho SSD-drive.
umehluko wemisindo nemiqondo yamagama
Uma kuqhathaniswa bendabuko, abathwali okuqinile kunezimo eziningana ezisivunayo: isebenze buthule, izinga ukudluliswa kwedatha idlula onobuhle zamanje, lokhu ipharamitha y HDD, kuhle kwegezi ngenhla. Lesi sakamuva kwenza laptop SSD-drive kuthandwa kakhulu, ukuvumela ukuba ugcine amandla webhethri.
Njengoba zonke lezi amadivaysi zinezikhathi unenamba memory amaseli imijikelezo, ukukhetha Kunconywa ukuba banake amamodeli zamanje, asebenzisa uhlelo eyinkimbinkimbi ezingaphezu kuka bezizukulwane ezidlule.
Ukwandisa ukusebenza nokuphila inkonzo, kubalulekile ukukhetha isixazululo sebhithi equkethe ukusekelwa SIKA umyalo.
Ngakho ukuthi esibonakalayo ayibuyi "bottleneck", kufanele ukhethe i-sata-2 noma Sata-3. Kunjalo we-USB - ayanda version, ngcono.
Iyiphi ividiyo ukushesha?
I izici eyinhloko angaphandle kanzima. Amathiphu Ukukhetha
I izici eyinhloko isithwebuli nezinhlobo zabo
Is it hle ukuthenga smartphone noma ithebulethi namhlanje?
Dermatitis Atopic: isu kwesokudla - indlela eqinisekile kwelulama
IsiZulu: ngokushesha lokho nasikhathi sokudla?
Venice - idolobha elihle phezu kwamanzi
Mini Cooper Countryman: ukujwayela kokuqala
Katya Gordon Biography of ihlazo abezindaba diva
Umuthi 'Dostinex ": ukubuyekeza nezincomo ukusetshenziswa
Indlela yokugqoka i-skirt-ilanga ebhentshini elinyanwe ngezandla zakho
Indlela ukuhlukanisa mbumbulu "Dzhek Deniels" kusukela nogologo yasekuqaleni
Kukanjani nomntwana esizalweni? Lokho kid azizwa ngayo nalokho akwenzayo esizalweni sikamama?
Kungani amadoda kufanele intombi eseceleni, futhi kanjani ukunqoba Umphikisi?
Ukushintsha izingongolo eMhlabeni: imvamisa, nemiphumela. Ngokuzayo Umhlaba